« အရပ်သားအများကို Human-shield လုပ်ခိုင်းခြင်းနှင့် မိုင်းရှင်းခိုင်းခြင်း ( mine – sweeper ) များမှာ စစ်ရာဇ၀တ်မှုမြောက်ပါသည်
မြန်မာပြည်မှာ ရှိသမျှ အာရဗစ် ကျောင်းများ အားလုံး မိခင်ဘာသာစကားနဲ့ သင်ကြားတယ် ဗျ .. »
လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကို ဆန့်ကျင်မှုနဲ့ တာဝန်ယူတတ်မှု
အင်္ဂလန်နိုင်ငံက ပရီးမီးယားဘောလုံးအသင်းဖြစ်တဲ့ ချယ်လ်ဆီးကလပ်အသင်းဟာ ပြင်သစ်ကလပ် ပီအက်စ်ဂျီအသင်းနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ၁၆ သင်းအဆင့် ရှုံးထွက်ပွဲစဉ် ပထမအကျော့ကို ပြီးခဲ့တဲ့ အင်္ဂါနေ့က ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ပြင်သစ်ကလပ်နဲ့ သရေကျခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်အပြီးမှာ အင်္ဂလန်ကို ပြန်ဖို့အတွက် ပဲရစ်မက်ထရိုဘူတာရုံမှာ ချယ်လ်ဆီးပရိတ်သတ်တွေ စုပြုံပြီး ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာပဲ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ ပြင်သစ်မော်ရစ်သျှအနွယ် လူမည်းအမျိုးသား ဆူလေမန်ဟာ အဲဒီ ဘူတာရုံကနေ နေအိမ်သို့ ပြန်ဖို့ ရထားပေါ်အတက်မှာ ချယ်လ်ဆီးပရိသတ်တွေရှိနှင့်ပြီးတဲ့ ရထားတွဲကနေ အ၀င်မခံဘဲ လူမျိုးရေးခွဲခြားခံရပြီး ရထားတွဲရဲ့အပြင်ဖက်ကို တွန်းထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ကို လူမျိုးရေးခွဲခြားသူ ချယ်လ်ဆီးပရိတ်သတ်အချို့က နှစ်ကြိမ်တိတိ တွန်းထုတ်တာကို ဘူတာရုံက လုံခြုံရေးကင်မရာတွေမှာ မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးသား ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
လူမျိုးရေးခွဲခြားသူချယ်လ်ဆီးပရိတ်သတ်အချို့ဟာ ရထားထွက်ခွာချိန်မှာလည်း “ငါတို့ဟာ လူမျိုးရေး ခွဲခြားသူတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ ဒါကို ငါတို့ နှစ်သက်တယ်” လို့ အော်ဟစ်သွားခဲ့ကြပါသေးတယ်။
လူလူချင်း အသားအရောင်ကွဲပြားမှုအပေါ်မှာ ခွဲခြားဆက်ဆံတာ၊ ဘာသာတရားအပေါ်မူတည်ပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေကို ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ဘယ်နေရာမှာမှ လက်ခံခြင်းမရှိတဲ့အတွက် လူမျိုးရေးခွဲခြားသူချယ်လ်ဆီးပရိတ်သတ်အချို့အတွက် ချယ်လ်ဆီးဘောလုံးကလပ်ပိုင်ရှင် အဗရာမိုဗစ်နဲ့ ကလပ်မန်နေဂျာ ဟိုဆေးမော်ရင်ဟိုတို့ဟာ အဲဒီဆိုးသွမ်းပရိတ်သတ်တွေရဲ့ လုပ်ရပ်အတွက် ရှက်ရွံ့ စက်ဆုတ်မိကြောင်း ချက်ချင်းဆိုသလို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီး အင်္ဂလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်တာဝန်ရှိသူတွေ အပါအ၀င် အင်္ဂလန်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေးဗစ်ကင်မရွန်း၊ ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဆပ်ဘလတ္တာ၊ Football against Racism နဲ့ Kick it out အဖွဲ့အစည်းတွေက အပြင်းအထန်ရှုတ်ချ အပြစ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အင်္ဂလန်နဲ့ ပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေကလည်း လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု ကျူးလွန်သူကို ပူးတွဲဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။
ပြင်သစ်ဘူတာရုံက လုံခြုံရေးကင်မရာ မှတ်တမ်းကို စစ်ဆေးကာ ကျူးလွန်သူကို စစ်ဆေးဖော်ထုတ်နေစဉ်အတွင်းမှာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ ပထမဆုံးပြန်ကစားခဲ့တဲ့ ဘန်လေအသင်းနဲ့ ပရီးမီးယားဘောလုံးပွဲစဉ်မှာတော့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းသားတွေဟာ ‘‘တန်းတူညီမျှမှုကို အားပေးတဲ့ ကစားပွဲ’’ လို့ရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ တီရှပ်တွေကို ၀တ်ဆင်ပြီးတော့ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကို ကလပ်ကစားသမားတွေပါ လက်ခံခြင်း မရှိကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြပါတယ်။
အသက် ၃၃ နှစ်အရွယ်ရှိ လူမည်းအမျိုးသား ဆူလေမန်ဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ည ပထမအကျော့ညက လူမျိုးရေးခွဲခြားစော်ကားခံခဲ့ရအပြီးမှာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ ဆက်သွယ်တောင်းပန်မှုအပြင် ပြင်သစ်သမ္မတ ဟော်လန်ရဲ့ ဖုန်းဆက်အားပေးစကားပြောဆိုမှု၊ ပီအက်စ်ဂျီအသင်း တာဝန်ရှိသူတွေဆီက အားပေး နှစ်သိမ့်မှုများကိုပါ လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။
ခုချိန်မှာတော့ ချယ်လ်ဆီးဘောလုံးကလပ်အသင်းနဲ့ မက်ထရိုပိုလီတန်ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ အဲဒီညက လူမျိုးရေးခွဲခြားခဲ့သူ သုံးဦးကို ပူးပေါင်းဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပြီး ချယ်လ်ဆီးကလပ်အသင်းက ရာသက်ပန် ပွဲကြည့်ခွင့် ပိတ်ပင်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပြီးတော့ အရေးယူသွားခဲ့ပြီလို့ သိရပါတယ်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံဥပဒေအရ အများနဲ့ဆိုင်တဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနေရာတွေမှာ လူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုပြုလုပ်ခဲ့ရင် ဒဏ်ငွေ စတာလင်ပေါင် ၄၅၀၀၀ ( ခန့်မှန်း မြန်မာငွေ ၆၇၅ သိန်းခန့်) အပြင် အမြင့်ဆုံး ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်ထိကျခံရနိုင်တာကြောင့် ဒီလူတွေဟာ ပြင်သစ်ဥပဒေနဲ့ အရေးယူခံယူဖွယ်ရှိနေသေးကြောင်း သိရပါတယ်။
လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ နေ့စဉ် ပုံနှိပ်ဖော်ပြပြီးသော်လည်းကောင်း၊
လက်ကမ်းကြော်ငြာစာအုပ်များ၊ တရားဝင်ပုံနှိပ်မီဒီယာများမှ ဘာသာရေးခွဲခြားစော်ကားမှုများကို ရေးသားဖော်ပြ၍သော်လည်းကောင်း၊
တရားဝင်ပါတီထောင်ကာ လူမျိုးရေးခွဲခြားခွင့်လိုင်စင်ကို တရားဝင်ရနေသလို အာဏာပိုင်များမှ ခွင့်ပြုနေ၍သော်လည်းကောင်း၊
သင်္ဃန်းစီးကာ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု ဘာသာရေးခွဲခြားစော်ကားနေမှုများအား မည်သူမျှ အပြစ်တင် ရှုတ်ချခြင်း မရှိသလို မလုပ်သင့်ဘူးဟုပင် တားမြစ်ခြင်းများပင် ရှိမနေသေးသည်က…
တန်းတူညီမျှမှု အပြည့်ရှိသော ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားနေပါပြီဟု ကြွေးကြော်နေမှုများမှာ မည်မျှ အဓိပ္ပါယ်မဲ့နေသည်ကို မြင်မိစေရန် ယခုသတင်းအား ဘာသာပြန်ကာ ရေးသားရခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း။
၂၃ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၁၅
This entry was posted on February 24, 2015 at 3:53 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.